Discount Semi-otomatiki Type Achigadzira Machine Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
Inowedzera Programmable Logic Controller (PLC) system pane yakajairwa michina, iyo inotora epamberi yemagetsi uye pneumatic zvinhu, uye mashandiro anogona kuchinjwa otomatiki uye nemaoko. Iko kutanga kwepakati uye kunogona kuchinja nzira dzekupisa zvinoenderana nemafomu echigadzirwa.
Inoderedza hunyanzvi zvinodiwa kune vanoshanda uye mashandiro ese anogona kudzorwa nePLC.
• Panguva imwe chete kudyisa kwakawanda kudyisa inlet kunoponesa zvakanyanya nguva yekudyisa.
• Nguva yeiyo kutenderera kwese kwekudya, kupisa, kutonhora uye kukonzeresa kwakarurama uye kugadzikana. Inochengetedza nguva, inoderedza mutengo, inovandudza mabhenefiti ehupfumi pamwe nekukudziridza mhando yechigadzirwa.
• Inoderedzawo kushanda nesimba uye mashandiro kuitira kuti munhu mumwe chete akwanise kushandisa michina yakati wandei.
Yakakura kwazvo Mould saizi
Yakadzvanywa Mhepo Kumanikidza
Muchina unogona kukura saizi eps chigadzirwa, bhokisi, pasuru, tireyi, nezvimwe. Isu tatotengesa muchina nyika dzinopfuura zana, tine mukurumbira wakanaka. Wese mutengi senge dhizaini uye yakagadzikana mhando.
Pashure: Yakazara otomatiki Kucheka Muchina
Zvadaro: PSZ Series Automatic Kuumba Machine